ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂံညောင်ဦးမြို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မှ တာဝန် ရှိလူကြီးမင်းတို့ အား သိရှိ နိုင်ပါရန် နှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ေ ပးနိုင်ပါရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ – Shwewiki.com
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂံညောင်ဦးမြို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မှ တာဝန် ရှိလူကြီးမင်းတို့ အား သိရှိ နိုင်ပါရန် နှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ေ ပးနိုင်ပါရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
၁.၂.၂၀၂၀ – ရက် ညေ န ၅နာရီ အချိန်ခန့်
ပု ဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းဖြစ်သည့် အိုးခြမ်းပဲ့ ကုန်းတွင် တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ကားဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်ထိ မောင်းတက်လာပြီး သည်နှင့် အရက်ဘီယာတစ်ဖာ.နှင့် သောက်မည်ပြုစဉ်…
ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိသော ပုဂံဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန် နှစ်ဦးမှ ဒီရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းပေါ်တွင် ကားများတက်၍ မရကြောင်းနှင့်အရက်ဘီယာကိုလဲသောက်၍ မရကြောင်းယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့စွာဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးမှပြောဆိုရာ…
မြန်မာစကားတတ်သည့် တရုတ်ဧည့်သည်တစ်ဦးမှ သူမှာဧည့်လမ်းညွန်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သူမှလာပြောစရာမလိုဘူး …..မိမိတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း သူတို့အလုပ် – လူတို့လုပ်တာဘယ်သူမှ သူတို့အားလာပြောစရာမလိုကြောင်း ….
သူတို့အား လာရောက်တာမြစ်သောသူသည် အလုပ်မှ ပြုတ်သွားနိုင်ကြောင်း ရင့်သီးသောစကားများဖြင့် ဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးအားပြောဆိုခဲ့သည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးမှလဲ မြန်မာစကားပြောတတ်သည့်တရုတ်လူမျိုး – စပုတ်ရှပ်လက်တိုအနက် ဝတ်ထားသူအား ဒါဆို မိမိဧည့်လမ်းညွန်ဆိုရင် – ဧည့်လမ်းညွန် လိုင်စင်ကတ်ထုတ်ပြပါဟု ပြောသောအခါ – မြန်မာစကားပြောတတ်သည့် တရုတ်လူမျိုးမှ ၎င်းနှင့်ပါလာသည့် – တရုတ်လူမျိုးအဖွဲ့ခေါ်ဆောင်၍ – ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်တရုတ် ကားများဖြင့် ထွက်ခွာသွားပါသည်။
ဖြစ်စဉ်နေရာအား ပုဂံနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ခရီးသွားလုံးခြုံရေးမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာသည်နှင့်ဖြစ်စဉ်အား ဒေသခံဧည့်လမ်းညွန် နှစ်ဦးမှ ပြောပြသည်နှင့် ၎င်းတို့တည်ခိုးသည့် နေရာသို့လိုက်လံစုံစမ်းမှုပြုလုပ်လျှက် ရှိပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂံညောင်ဦးမြို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတို့ အား သိရှိနိုင်ပါရန် နှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Min Latt ဓာတ်ပုံ – ကိုဆော် (ပုဂံ)
၁.၂.၂၀၂၀ – ရကျ ညေ န ၅နာရီ အခြိနျခနျ့
ပု ဂံမွို့ဟောငျး စူဠာမဏိဘုရား တောငျဘကျ ရှဟေ့ောငျးအုတျကုနျးဖွဈသညျ့ အိုးခွမျးပဲ့ ကုနျးတှငျ တရုတျခရီးသှားဧညျ့သညျမှ ကိုယျပိုငျမျောတျောကားဖွငျ့ ရောကျရှိလာရာ ထိုအုတျကုနျးပျေါထိ မောငျးတကျလာပွီး သညျနှငျ့ အရကျဘီယာတဈဖာ.နှငျ့ သောကျမညျပွုစဉျ…
ထိုအုတျကုနျးပျေါတှငျရှိသော ပုဂံဒသေခံ ဧညျ့လမျးညှနျ နှဈဦးမှ ဒီရှဟေ့ောငျးအုတျကုနျးပျေါတှငျ ကားမြားတကျ၍ မရကွောငျးနှငျ့အရကျဘီယာကိုလဲသောကျ၍ မရကွောငျးယဉျကြေးသိမျ့မှစှေ့ာဒသေခံ ဧညျ့လမျးညှနျနှဈဦးမှပွောဆိုရာ…
မွနျမာစကားတတျသညျ့ တရုတျဧညျ့သညျတဈဦးမှ သူမှာဧညျ့လမျးညှနျဖွဈကွောငျး ဘယျသူမှလာပွောစရာမလိုဘူး …..မိမိတို့နှငျ့မသကျဆိုငျကွောငျး သူတို့အလုပျ – လူတို့လုပျတာဘယျသူမှ သူတို့အားလာပွောစရာမလိုကွောငျး ….
သူတို့အား လာရောကျတာမွဈသောသူသညျ အလုပျမှ ပွုတျသှားနိုငျကွောငျး ရငျ့သီးသောစကားမြားဖွငျ့ ဒသေခံ ဧညျ့လမျးညှနျနှဈဦးအားပွောဆိုခဲ့သညျနှငျ့ ဧညျ့လမျးညှနျနှဈဦးမှလဲ မွနျမာစကားပွောတတျသညျ့တရုတျလူမြိုး – စပုတျရှပျလကျတိုအနကျ ဝတျထားသူအား ဒါဆို မိမိဧညျ့လမျးညှနျဆိုရငျ – ဧညျ့လမျးညှနျ လိုငျစငျကတျထုတျပွပါဟု ပွောသောအခါ – မွနျမာစကားပွောတတျသညျ့ တရုတျလူမြိုးမှ ၎င်းငျးနှငျ့ပါလာသညျ့ – တရုတျလူမြိုးအဖှဲ့ချေါဆောငျ၍ – ၎င်းငျးတို့ကိုယျပိုငျတရုတျ ကားမြားဖွငျ့ ထှကျခှာသှားပါသညျ။
ဖွဈစဉျနရောအား ပုဂံနယျမွရေဲတပျဖှဲ့နှငျ့ခရီးသှားလုံးခွုံရေးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ရောကျရှိလာသညျနှငျ့ဖွဈစဉျအား ဒသေခံဧညျ့လမျးညှနျ နှဈဦးမှ ပွောပွသညျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့တညျခိုးသညျ့ နရောသို့လိုကျလံစုံစမျးမှုပွုလုပျလြှကျ ရှိပါသညျ။
ထိုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ပုဂံညောငျဦးမွို့ သကျဆိုငျရာ ဌာန မှ တာဝနျရှိလူကွီးမငျးတို့ အား သိရှိနိုငျပါရနျ နှငျ့ဆကျလကျဆောငျရှကျပေးနိုငျပါရနျတငျပွလိုကျရပါသညျ။
Min Latt ဓာတျပုံ – ကိုဆျော (ပုဂံ)